တရုတ်လူနာသည် SUN-603S ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုစစ်ဆေးပေးသည် နေရောင်
မော်ဒယ်နံပါတ် နေ -603S
ပါဝါအရင်းအမြစ် DC, AC
ပစ္စည်း သတ္တု, ပလပ်စတစ်
သက်တမ်း ၁ နှစ်
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစံ Class II
ပြသရန် ၁၂.၁ လက်မအရောင် TFT LCD
Parameter ECG, RESP, NIBP, SPO2,2TEMP, PR စနစ်, 2IBP, CO2
ရှည်လျားသောလမ်းကြောင်းသစ်နာရီ နာရီ ၄၈၀
ECG လှိုင်းပုံစံ ၇၂ နာရီ
ဘာသာစကားမျိုးစုံ စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပေါ်တူဂီ၊
လျှောက်လွှာ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, ကလေးနှင့်မွေးကင်းစကလေး
ခဲအမျိုးအစား3ခဲ5ခဲ
holographic လှိုင်း ၄၀ စက္ကန့်
NIBP တိုင်းတာမှုများ 2400
ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည် - တစ်နှစ်လျှင်ယူနစ် / ယူနစ် ၂၀၀၀၀ အရေးကြီးသောအမှတ်အသားစက်
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: အရေးကြီးသောသင်္ကေတစက်အတွက် Air- ထိုက်သောထုပ်ပိုး / ပင်လယ်ခံထိုက်သောထုပ်ပိုး
အသုံးပြုသူအတွက်အဆင်ပြေသော Elegant အသွင်အပြင်၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအမှတ်အသားများ၊ စံမျက်နှာပြင်၊ OXYCRG SCREEN, trend graph, character ကြီးများ၊ အခြား BED လေ့လာရေးများ။
* လူကြီး၊ ကလေးနှင့်မွေးကင်းစကလေးများအတွက်လျှောက်ထားပါ။
ECG, RESP, NIBP, SPO2 နှင့် dual-channel TEMP ၏စံသတ်မှတ်ချက်များ။ IBP, CO2၊ ပါ ၀ င်သည့်ပရင်တာ၊ ကွေးသောလက်ကိုင်၊ ရွေ့လျားနေသောဘရိတ်နှင့်ဆွဲထားသည့်ကွင်းခတ်သည်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
* တရုတ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ဖြင့်စစ်ဆင်ရေး interface ။ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုသော့နှင့်ဘူးသီးများဖြင့်အပြီးသတ်ပါ။ (ရွေးချယ်နိုင်သည့်ဘာသာစကားများ - စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပေါ်တူဂီ၊ တာ့ခ်ျ၊ ဂျာမန်စသည်ဖြင့်) ဒီဇိုင်းအပြည့်အစုံပါ ၀ င်ပြီးအပြည့်အဝပါ ၀ င်သည့်မော်ဂျူး၊ တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်။
* ၁၂.၁ လက်မအရောင်ရှိသော TFT LCD သည်လူနာ၏အချက်ပြမှုနှင့် waveform နှင့်အချက်ပြခြင်း၊ အိပ်ရာ NO၊ နာရီ၊ ပြည်နယ်နှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုမော်နီတာမှတပြေးညီဖော်ပြပေးသည်။
ပါဝင်သည့်အရာများ၊ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုနှုန်း၊ အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ထွက်ရှိမှုများကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
* ၄၈၀ နာရီလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်း၏သိုလှောင်မှုနှင့် ၄၀ စက္ကန့်ရုပ်ပုံလှိုင်းပုံစံကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
၇၂ နာရီ ECG လှိုင်းကိုသိုလှောင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
* NIBP ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏လုပ်ဆောင်ချက်၊ ၂၄၀၀ အထိ NIBP အချက်အလက်သိုလှောင်မှု။
* အားကောင်းသောဆန့်ကျင်နှောက်ယှက်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်သောအားဖြည့်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသောဒီဂျစ်တယ် SPO2 နည်းပညာကိုအသုံးပြုပါ။
* ကွန်ယက် - ဗဟိုဘူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ အခြားအိပ်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲမွမ်းမံခြင်း။ ချိတ်ဆက်မှုမုဒ်: ကြိုးမဲ့နှင့်ဝါယာကြိုး။
* အနှောင့်အယှက်မရှိစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ပါ ၀ င်သည့်အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီ။
* ECG, SpO2, RESP, BP နှင့်တစ်လုံးသော့ဖြင့်အပူချိန်အချက်အလက်များကိုပုံနှိပ်ပါ။
ကြိမ်နှုန်းမြင့် Anti-high frequency ခွဲစိတ်ကုသမှု၊ defibrillation-proof (အထူးဆောင်များအတွက်လိုအပ်ချက်) ။
* နှလုံးခုန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်မှု (HRV) အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် (ရွေးချယ်နိုင်) ။
ဤပစ္စည်းကိရိယာများသည် ECG, RESP, SPO2, NIBP နှင့် Dual-channel TEMP ကဲ့သို့သော parameters များကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျဉ်းမြောင်း။ သယ်ဆောင်နိုင်သောစက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရန် parameter ကိုတိုင်းတာခြင်း module, display နှင့် recorder ကို device တစ်ခုတွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်း၏ built-in အစားထိုးဘက်ထရီလူနာရွေ့လျားများအတွက်အဆင်ပြေသည်။
* နှလုံးခုန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်မှု (HRV) အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလုပ်ဆောင်ချက် (ရွေးချယ်နိုင်သည်)
ခဲ Mode ကို 3- ခဲနှင့်5ခဲ optional ကိုဖြစ်ကြသည်
ခဲရွေးချယ်ခြင်း ၁၊ ၂၊ ၃၊ AVR, AVL, AVF, V
Wave ကို - ခဲ - 2:2လိုင်းများ
3- ခဲ: 1channel
× 2.5mm / mV ×× 10mm / mV, 20mm / mV ×× 5mm / mV၊
HR တိုင်းတာခြင်းနှင့် Alarm Range
15 ~ 300 bpm အထိ
တိကျမှန်ကန်မှု± 1% သို့မဟုတ်± 1bpm, သာ။ ကြီးမြတ်သည်
resolution ကို 1 bpm
ခွဲစိတ်မှု≥ 100 dB
ရောဂါ≥ 60 dB
ခွဲစိတ်ကုသမှု 1 ~ 20 Hz (+ 0.4dB, -3dB)
စောင့်ကြည့် 0.5 ~ 40 Hz (+ 0.4dB, -3dB)
ရောဂါရှာဖွေရေး 0.05 ~ 75Hz (+ 0.4dB, -3dB); 76Hz ~ 150Hz (+ 0.4dB, -4.5dB)
Calibration Signal 1 mV (Vp-p)၊ ၅% တိကျမှု
တိုင်းတာခြင်းနှင့် Alarm Range -0.6 mV ~ + 0.8 mV
ARR အမျိုးအစား ASYSTOLE, VFIB / VTAC, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ VT> 2, PVC, Tachy, Brady, လွဲချော်စည်းချက်, PNP, PNC
ECG Waveform အတွက် Scan Speed ​​ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်
12.5mm / s တိကျမှန်ကန်မှု± 10% 25mm / s တိကျမှု± 10%
50mm / s တိကျမှန်ကန်မှု± 10%
Method ကို RF (RA-LL) impedance
Differential Input Impedance> 2.5 MΩ
Impedance Range ကို 0.3 ~ 5.0Ωတိုင်းတာခြင်း
အခြေခံ Impedance Range 100Ω - 2500Ω
bandwidth ကို 0.3 ~ 2.5 Hz
Resp ။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
တိုင်းတာခြင်းနှင့်နှိုးစက် Range0~ 120rpm
တိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုင်းတာသည်±2rpm
Apnea နှိုးစက် 10 ~ 40 S က
Mode ကို manual, အော်တို, စဉ်ဆက်မပြတ်
AUTO မုဒ်ဖြင့်တိုင်းတာသောကြားကာလ 1/2 / 3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 Min
စဉ်ဆက်မပြတ် Mode တွင်တိုင်းတာခြင်းကာလ ၅ မိနစ်
တိုင်းတာခြင်းနှင့်နှိုးစက်အကွာအဝေး 10 ~ 270mmHg
နှိုးစက်အမျိုးအစား SYS, DIA, ဆိုလိုတာက
cuff ဖိအား±3mmHg
တိကျမှု± 10% သို့မဟုတ်± 8mmHg, သာ။ ကြီးမြတ်သည်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Mode 315 ± 10 mmhg
ကလေး Mode ကို 265 ± 10 mmhg
မွေးကင်းစကလေး Mode ကို 155 ± 10 mmhg
အတိုင်းအတာပမာဏ0~ 100%
အချက်ပေးစက်0မှ ၁၀၀%
တိကျမှန်ကန်မှု 70% ~ 100% ± 2%
0% ~ 69% သတ်မှတ်မ
တိုင်းတာခြင်းနှင့် Alarm Range0~ 250bpm
တိုင်းတာမှုတိကျမှု± 2bpm or ± 2%၊
တိုင်းတာခြင်းနှင့် Alarm Range0~ 50 ° C
resolution ကို 0.1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
တိကျမှန်ကန်မှု± 0.1 ° C
1 စက္ကန့်အကြောင်းကို Actualization Interval ။
ပျမ်းမျှကြာချိန် <10 စက္ကန့်.
အချိန်တုံ့ပြန်မှုနှိုးစက် min2 မိနစ်
Method ကို Sidestream သို့မဟုတ်ပင်မ
တိုင်းတာခြင်း Range CO20~ 150mmHg
CO2 အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက် -
0.1 မီလီမီတာ Hg0င် 69 မီလီမီတာ Hg
0.25 မီလီမီတာ Hg 70 မှ 150 မီလီမီတာ Hg
CO2 အတွက်တိကျမှု -0မှ 40 mm Hg ±2mm Hg
71 - 100 မီလီမီတာ Hg ± 8%
အသက်ရှူနှုန်း> 80BPM ± 12%
AwRR Range2~ 150 rpm ပါ
AwRR တိကျမှု± 1BPM
Apnea Allarm ရရှိနိုင်ပါသည်
အေအက်ဖ်ပီ, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2
တိုင်းတာခြင်းနှင့်အချက်ပေး Range -50 ~ 350 မီလီမီတာ Hg
resolution 1 မီလီမီတာ Hg
တိကျမှု± ၂% သို့မဟုတ် ၁ မီလီမီတာ Hg ထက်သာလွန်သည်
မျက်နှာပြင်အကျယ် ၁၂.၁ လက်မရှိပြီး TFT LCD အရည်အသွေးမြင့်သည်။
ပါဝါထောက်ပံ့ရေး 220V, 50Hz
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအမျိုးအစားခွဲခြား CF အမျိုးအစား CF defibrillation- အထောက်အထားအစိတ်အပိုင်း
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ - အရွယ်အစား ၃၈၀ × ၃၅၀ × ၃၀၀ (မီလီမီတာ) အသားတင်အလေးချိန် ၄.၈ ကီလိုဂရမ်
၁။ အရွယ်ရောက် SpO2 အာကာသယာဉ် (၅ ကောင်)
၂။ လူကြီး NIBP cuff
4. ECG ခဲ
5. ECG လျှပ်ကူးပစ္စည်း
ရှေ့သို့ SUN-700S လူနာမော်နီတာ
နောက်တစ်ခု: GYN, OB၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါအတွက် Laptop Ultrasound